Mahad Cawad “Ma aqoonsanin guddiga Maaliyadda,waana la kala diray” – Somali Top News
Mahad Cawad “Ma aqoonsanin guddiga Maaliyadda,waana la kala diray”
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha shacabka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa war ka soo saaray habka uu u shaqeynayo golaha shacabku inta lagu jiro kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhashay kala diristii guddiga maaliyadda iyo habka loo maareynayo doorashada dowladgoboleedka KGS.
Mahad waxa uu shirkiisa Jaraa’id ku sheegay
1: In hoolka Villa Hargeysa aan lagu qaban karin kulamo siyaasadeed islamarkaana loo baahanyahay in Shaqaaluhu ay ku shaqeeyaan.
2: In Guddigii Maaliyadda ee la kala diray uu sidiisii yahay,islamarkaana aan la aqoonsaneyn,waxaana uu guddoomiye Mursal ugu baaqay in go’aankiisii soo celinta Guddiga uusan ahayn mid sharciga waafaqsan.
Shaqaalaha Golaha Shacabka ayuu sheegay in aysan fulin karin go’aanno maaliyadeed oo uusan u dhameyn Guddoonka Golaha shacabka. iyo qodobo kale.
Wali waxaa Magaalada Muqdisho ka jira xiisadda ka dhalatay Mooshinka ay 92 xildhibaan oo kamid ah golaha shacabku ay ka gudbiyeen Madaxeyne Farmaajo.
Ilo kudhow Villa Somalia ayaa u sheegay Warbaahinta in uu jiro tuhun ah in soo jeedinta xilka qaadista madaxweynaha Jamhuuriyadda ay ku lugleeyihiin gacmo shisheeye, balse weli ma jiro war madaxbanaan oo xaqiijiyey ama diiday jiritaanka tuhunkaas.
← Guddoomiyaha Baarlamaanka oo xabsi guri laga dhigay
Somali MPs join together to impeach president over Ethiopia, Eritrea ‘deals’ →
Askari Qof Shacab Ah Ku Dilay Magaalada Baladweyne
July 12, 2018 Somali Top News 0
Jawaab deg deg ah oo laga dalbaday Dowladda Soomaaliya iney kabixiso gafka Itoobiya ee Qaranimada dalka